सामर्थ्यवान साहसि ब्यक्तिको लागि जुन कुनै कार्य पनि कठिन हुँदैन । त्यस प्ररकार का मानिसहरुले चाहेअनुसार का राम्रा काम हरु गर्न सक्छन । ब्यवसाय गर्ने मानिसको लागि कुनै ठाउँ पनि टाढा हुँदैन । बिद्वान मानिस लाई बिदेस पनि टाढा लाग्दैन । आफ्नो बिदुताको कारणले सबै ठाउमा मित्र र अनुयायी बन्दछन । जो ब्यक्ती नम्र भएर बोल्छ व्यवहार पनि त्यस्तै छ - उसलाई कोही पनि पराइ लाग्दैन । जसले शत्रु लाई पनि आफ्नो बसमा ल्याउन सफल हुन्छ ।
जसले पुल, ईनार - कुवा -बाटा घाटा मन्दिर -मठ -स्कुल -अथवा सार्वजनीक कुरामा ध्यान दिन्छ, काम गर्छ -त्यही समाज सेवी हो। आफ्नो लागि मात्र दौड धुप गर्ने त्यो अवसर बादी र स्वार्थी हो । देस र समाज लाइ निकास तर्फ डोर्‍याउन समाज सेविले मात्र दिन सक्छन । अवसर बादिले होइन, सामाजिक कार्यमा जसले अभिरुची राख्छ त्यही ब्यक्ती नै राजनीतिज्ञ ठहर्छ । राजनितिको नाम बाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने जुन मतलवी मान्छे हुन्छ त्यो चान्डाल सरह हो । त्यो समाज सेवी हुनै सक्दैन । स्मरण रहोस नास्तिक हरु नै सामाजिक कार्य बिरुद्ध लाग्ने गर्छन् र अपराधी हरु नै सस्कृती बिरोधि हुन ।
Subedi ji ko lekh choto ra mitho lagyo. bastabma manbaiatako khaka kordai, jivanlai manbia sewama samarpit garna sikayako chha.
lekhak bat yastai dherai rachana ko aasha garna sakincha.